Ukunciphisa inani lamaphathi asendlini angagunyaziwe ku-Airbnb kade kuyinto esemqoka. Sithatha izinyathelo ukuze sisekele uhambo oluphephile nolubonisa ukucabangela. Lokhu kusho ukuthi ukubhukha okuthile okubonisa izici zobungozi obukhulu bokuba khona kwephathi kungase kuvinjelwe.
Indlela okusebenza ngayo: Izivakashi ezinenani eliphansi lokuphawula zivinjelwe ukwenza ukubhukha komzuzu wokugcina wendlu ephelele.
Nakuba lokhu kungase kuphazamise, kukhona okunye ongakukhetha. Le mingcele ayisebenzi ehhotela noma ezindaweni ezingamakamelo, ngakho ungase ufune ukusesha lezo zinhlobo zezindawo.